Nhungamiro Yekubudirira Kwekudyara Kwekusiyana | Ehupfumi Zvemari
Nongedzo yeKubudirira Kwekudyara Kwekusiyana
Imwe yekiyi iwe yaunofanirwa kuchengetedza yako equity mashandiro pasina mubvunzo kusiyanisa mari dzako. Nekuti mukuita, hauchazokwanisa chete kuwedzera purofiti kubva zvakafanana. Kana zvisiri, izvo zvakare zvichakubatsira iwe kurarama neakanyanya kusarongeka mamiriro emusika wekutengesa. Iko kune njodzi huru yaunayo ndeye iyo yese mafambiro iyo yawakavhura panguva iyoyo chaiyo. Uye zvakare, ichave iri nyore nzira yekushandisa uye iyo yakavhurika kune ese ma profiles evadiki nepakati varimi.
Nekuti izvo zvazviri ndezvekuti iwe hauise mari yako ese ekuchengetedza mudengu rimwechete rezvemari zviwanikwa. Asi pane zvinopesana, iwe unozvigovera pakati penzira dzakasiyana dzekudyara uye nei zvisingaiti pakati pezvakasiyana zvigadzirwa zvemari. Kubva pane zvakajairika kune izvo zvinotakura njodzi huru mukushanda kwavo. Kubatanidzwa kwavo kunogona kukuunzira mabhenefiti mazhinji kubva zvino zvichienda mberi. Kusvika padanho rekuvandudza iyo yaunowana pane yako mari. Icho chinangwa chekuti mushure mezvose iwe unenge uchitsvaga kubva pakutanga.
Imwe yemabhenefiti akakosha anorehwa neiyi investment system ndeyekuti inokutendera iwe kusarudza mhinduro dzakasiyana. Mamwe acho echinyakare, asi mamwe acho chaiwo uye muzviitiko kunyange zvine hungwaru. Zvekuti iko kumagumo hukama hwako nenyika yemari hunogutsa zvakanyanya kupfuura iko zvino. Iwe unongofanirwa kuisa kufarira kushoma uye pamusoro pezvese zvakanyanya chirango kuti uzviite pamwe nekururamisa kwakakwana. Nechokwadi chese, zvichave zvakakosha kune iwo akanakisa mhedzisiro iwe aunogona kuwana kubva kune idzi nzira dzekudyara.
1 Kusiyanisa mukudyara
2 Nyorera zvigadzirwa zvebhangi
3 Enda kune dzimwe nzvimbo dzenyika dzakawanda
4 Sarudza anoshanda manejimendi modhi
5 Usaise mari yese
Ehezve zvichave zvakafanira kuti kusiyanisa mari dzako dzaunoenda mhando dzakasiyana dzemari. Chinokosha chebudiriro ndechekuti iwe unogona kusanganisa equities nemari yakatarwa, kunyangwe nemamwe mafomati seyakakodzera kwazvo fomati yekudzivirira yako mari yemari kubva pakutanga. Une misiyano mizhinji, yakawanda seyakagadzirwa nemasangano emari. Iko kwauchazongofanira kutsvaga nekuona iyo inokodzera zvakanyanya mamiriro ako sevatengesi vevatengesi.
Imwe yemhinduro dzinoshanda kwazvo dzinopihwa nemusika wemari unobva Investment funds. Nekuti icho chigadzirwa chinotendera chero hupfumi hwemari kuti hubatanidzwe mune imwecheteyo modhi. Nezvakanakira kuti une mari zhinji yaunosarudza kubva uye inopa hunhu uhu. Aya ndiwo anoshanda manejimendi mamodheru akagadzirwa nemasangano anotarisira kugadzira ino yakasarudzika investimenti. Kunyangwe chibvumirano kubva kune imwe mari isiri iyo euro: dhora, mafranc kana yen yeJapan.
Mari yekudyara inosanganisa akasiyana siyana emari midziyo inotakura akateedzana ezvakanakira kusiana kwemari. Pakati pavo, kuti kurasikirwa kwako kunenge kuri kushoma muzviitiko zvakanakisa zvemisika yezvemari. Zvekuti nenzira iyi unogona kushanda zvirinani mune zvese zvinogoneka zviitiko. Imwe yemamodheru ayo anonyanya kutora maitiro aya akavhenganiswa mari yekudyara. Ivo vanobatanidza mhando dzese dzemari, Ndisingafanire kupa chero rudzi rwemari chikumbiro. Kubva pane ese maonero: ane hasha, anozvidzivirira kana epakati.
Nyorera zvigadzirwa zvebhangi
Imwe yemaitiro ekusiyanisa mari yako ndeyekutenga zvigadzirwa zvebhengi kubva kune yakachena mari. Nguva yekuisa mari, manotsi ekuvimbisa kubhengi kana maakaundi ane mari yepamusoro anova mamwe acho. Mupiro wekutanga weiyi yekuchengetedza modhi inotorwa kubva kune iyo ichakupa iwe yakatarwa uye yakavimbiswa kudzoka gore rega. Mari yako haizove yakanyanya kukwirira, asi zvirinani kuti hauzorasikirwi nemari mune chero kudonha. Icho chinhu chinofarira chisinga pfuure iwo 2% mazinga. Ichave iri zano rekuchengetedza, asi chero zvaro rinounza kugadzikana kwakawanda kune yako portfolio. Kunyanya apo misika yezvemari inoratidza yakawanda kusava nechokwadi.
Iwe unogona kugovera chikamu chemari yako kune izvi zvigadzirwa zvebhangi kusiyanisa mashandiro. Uye zvakare, iwo ari akapusa mamodheru ekuchengetedza ekuhaya ayo asingade ruzivo rwakakosha pachikamu chako. Kunyangwe muzviitiko zvakawanda iwe uchafanirwa kumirira kupera kwavo kuitira kuti mabhenefiti aende kuakaundi yako yekutarisa. Nechivimbiso chakazara icho iwe unenge uine yakavimbiswa kudzoka pane yako mari. Hazvishamise kuti ndizvo zvigadzirwa uko mari yevabereki vako kana sekuru nasekuru yakarairwa kuti iite purofiti.
Izvi zvigadzirwa zvinodhura kwazvo kumhuri dzese. Nekuti ivo vanogona kupihwa basa kubva pamari shoma kwazvo. Tsika kubva pamipiro yemari kubva ku1.000 euros. Nenguva dzakasiyana dzekugara zvachose zvichienderana nezvinodiwa zvako zvekuvhara mari kubva panguva iyoyo. Kunyangwe iwe uchinge uine dambudziko rekuti iwe haugone kuadzima pamberi, nekuti kunyangwe mabhanga anogona kunyorera komisheni yeichi chimiro chiri kutenderera 2%.
Enda kune dzimwe nzvimbo dzenyika dzakawanda
Imwe kiyi yekusiyanisa mari yako inochengeterwa kwete kungozvimisira wega kumisika yemari yenyika Iwe unogona kutora mukana weiyo Push yeimwe nzvimbo yekutengesa kuti uwedzere yako yekutarisa account account. Nekuti mukuita, nenzira iyi iwe unenge uri munzvimbo iri nani yekuvhura mikana mitsva yebhizinesi iriko mune dzimwe nzvimbo muupfumi hwenyika dzese. Kwete chete kubva kuequity, asiwo kubva kune yakatarwa mari. Asi pamusoro pezvose kuburikidza nedzimwe nzira dzekudyara: mbishi zvigadzirwa, simbi dzinokosha, nezvimwe.
Imwe yemhedzisiro yeiyi chaiyo zano ndeyekuti iwe uchave unokwanisa kusvika kwakawanda kwedzinosvika mari yako. Uye semhedzisiro yavo, mikana yekuvandudza kudzoka kwako ichakwira zvakanyanya zvichienzaniswa nedzimwe nzira dzekudyara. Ichokwadi zvakare kuti iwe uchafanirwa kutora njodzi hombe, asi ndiwo mubhadharo wauchazobhadhara kuti uve nechinzvimbo mune zvaunotaura zvine chekuita nenyika yemari. Kuti usvike misika yezvemari iyo kusvika makore mashoma apfuura zvaisakwanisika zvachose. Zvakanaka, kubva ikozvino zvichienda mberi iwe unogona kusarudza iyi imwe modhi.
Une muequities dzeUnited States imwe yemisika yepamusoro kuita kuti chishuwo ichi chibudirire. Nesarudzo yekuenda kumisika yehunyanzvi uko makambani akanakisa mune ino bhizinesi inosanganisirwa. Kana kunyangwe misika yeAsia kana yavo mamiriro vachida izvozvo. Iyo inobatsira zvikuru imwe nzira kune dzimwe nguva muhupfumi hwepasi rose. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kumutsiridza yako yekudyara portfolio nguva nenguva. Kukurudzira kukura kwekutarisira mune yako mari chirevo.
Sarudza anoshanda manejimendi modhi
Pasina kupokana, kuita uku kuchakupa unopfuura mufaro mumwe kubva zvino zvichienda mberi. Ndeipi chinangwa chauchazadzisa? Zvakanaka, chimwe chinhu chakareruka sekuenderana nezviitiko zvese zvinogona kuitika, kunyangwe izvo zvishoma zvinobatsira pane zvako zvaunofarira. Mari yekudyara ndiyo inonyatsotora iri zano. Kupi mamaneja pachawo anotarisira kuvandudza zvinhu zvemari zvichienderana nemamiriro emusika. Nenongedzo dzenguva nenguva dzenhare dzekudyara Seye chete fomula yekuwedzera kudzoka pane zviwanikwa.
Pane chero nguva yakapihwa, yakatarwa kana inoshanduka mari inogona kusimudzirwa, kusarudza akanakisa emabhizinesi mikana pane imwe nhambo. Kunyangwe nekwaniso ye kukomberedza nzvimbo dzeeuro. Kudzivirira kufamba kusingadiwe semhedzisiro yemitengo yemari yepasi rose yemari. Chero zvazvingaitika, iri modhi iyo iri kuwedzera nhamba yevarimi varikusarudza. Ivo maneja wehomwe ndivo vari kutarisira kuita aya mashandiro. Iwe haufanire kuita chero chinhu, nekuti izvo zvinonzi zvinoshingairira mari yekudyara.
Usaise mari yese
Kusiyanisa kunofanirwawo kutsigirwa nemashandiro akagadzirwa nechikamu chakakosha kwazvo pamasevha ako, asi uchisiya kumwe kunyorera muakaundi yako yekutarisa. Chekutanga pane zvese, zve chengetedza nzvimbo dzako mukutarisana neyakaipa maitiro mumisika yemari. Asi zvakare kuve muchinzvimbo chekutora mukana wemabhizinesi mikana ichaonekwa pamwedzi mishoma inotevera. Kuti izvi zvive zvakadaro, hauzove nesarudzo kunze kwekusiya ammo kuti uwedzere mashandiro ako.
Iyo muzana yemari yako yekudyara inofanirwa kunge iri iyo inowirirana neiyo investor chimiro iwe yaunopa. Hazvizove zvakafanana mune saver ine hukasha kupfuura mune imwe yakajeka inodzivirira. Iwe unofanirwa zvakare kuzvibvunza iwe kuti chii chinonzi mwero wemari yauchatarisana nayo mumwedzi inotevera. Nechinangwa chekusawira mumuedzo wekuita mashandiro akashata muinvestment. Inotorwa kubva pane zvaunoda kuti uwane imwe mari yekuvhara idzi mari dzemari.
Izvo zvakare zvinokurudzirwa zvakanyanya kuti govera mari yako zvakaenzana pakati pezvigadzirwa zvemari zvakasiyana vakasarudzwa. Pasi pematanho aunofunga akakodzera kudzivirira zvaunofarira. Iko chikamu chidiki chemipiro yako chinofanira kuenda kuzvigadzirwa zvinotakura nhanho dzakakwirira. Nechikamu chidiki chichava chakaringana kuzadza ichi chikumbiro. Nekuti ndipo paunogona kurasikirwa nemari yakawanda kana iyo investa ikasasangana nezvinotarisirwa zvakagadzirwa kubva pakutanga.
Zvakanaka, kana iwe ukateerera kune mamwe emazano aya, usakahadzike kuti mari dzako dzichaenda zvirinani kubva ikozvino. With mikana mikuru yezvibereko inowedzera. Kana zvisiri zvakanyanya, hongu zvirinani kuti iwe ugone kuzviona zvakajeka muchiyero cheakaundi yako yekuchengetedza. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kubhadhara iyo isinganzwisisike yako whim.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Nongedzo yeKubudirira Kwekudyara Kwekusiyana
Eduardo Ernesto Garay akadaro
Senge kudonha nekutya muArgentina. Iyo yakatarwa nguva ine 49% pagore mwero. Dhipoziti yemazuva makumi matatu inopa iyo renti, 30% pamwedzi. Kuita kuverenga kwakaomarara kwekumutsiridza iyo huwandu uye yakaunganidzwa pamwedzi yemari pamwedzi zvingatipa 4.28% mumwedzi gumi nemiviri. Mubvunzo unenge uri wekuti, gomo rakadaro rekubatsira mari yemunyika rinotsigirwa sei kana paine hombe yakakura kwazvo yakaiswa muchigadzirwa ichi chebhangi? Uye zvakare, izvi zvinongochengetedza kukosha kwedhipositi padanho rekuchengetedza mari sezvo kudzikisira kwemari yeArgentina kuchave kwakatenderedza 65.35 kusvika 12% zvine chekuita nekutengesa kwakatengeswa mumusika wepamba uye inflation yepamutemo ye58 kusvika 64% pagore.
Pindura Eduardo Ernesto Garay
Ndarama inosvika pakukwirisa kwayo nematanho akanaka
Ndezvipi zvinofarirwa nemari zviri pamutemo?